Iwu kuki - Mili m
Nkata gị enweghị isi
Tinye ndetu maka ndị na-ere ahịa ...
mkpokọta ụgbọ ibu
Jiri akwa na puse
Jiri ahihia gbazee ya
Jiri akwa nwere fee
Teepee set na akwa
Ohiri isi mara mma
Ohiri isi ojii
Ohere ohiri isi
Okirikiri okirikiri okirikiri
Ndobe zuru oke maka ohiri isi
Ogige nke kpakpando
Ọkụ nke shells
Nkịtị oge gboo
nile anākwuba na nti
Ngwunye na isi
Ndị Nrọ Ejiri Nrọ
Ma na-aga gburugburu
1. Thelọ ahịa anaghị anakọta ozi ọ bụla na-akpaghị aka, belụsọ maka ozi dị na kuki ahụ.
2. Kuki (nke a na-akpọ "kuki") bụ data IT, na faịlụ ederede, nke echekwara na ngwaọrụ ngwụsị Userlọ Ahịa ma echekwa maka iji weebụsaịtị weebụ. Kuki na-enwekarị aha weebụsaịtị nke ha sitere na ya, oge nchekwa ha na ngwaọrụ ngwụsị na ọnụọgụ pụrụ iche.
3. Thelọ ọrụ na-etinye kuki na ngwaọrụ ngwụcha nke Onye Ọrụ Storelọ ahịa na ịnweta ha bụ onye na-ahụ maka Storelọ Ahịa.
4. A na-eji kuki eme ihe: iji dozie ọdịnaya nke weebụsaịtị nke ụlọ ahịa ahụ na mmasị Onye ọrụ wee kwalite iji weebụsaịtị. Karịsịa, faịlụ ndị a na-enye ohere ịghọta ngwaọrụ Store Store ma gosipụta weebụsaịtị ahụ nke ọma, kwekọrọ na mkpa onye ọ bụla; o mepụta ọnụ ọgụgụ ndị na-enyere aka ịghọta otu Ndị Ọrụ Nchekwa si eji weebụsaịtị, nke na-enye ohere imeziwanye ihe ha na ọdịnaya;
5. Storelọ ahịa na-eji ụdị kuki abụọ dị mkpa: kuki "nnọkọ" na kuki "na-adịgide". Kuki oge a bụ faịlụ nwa oge echekwara na ngwa ngwụcha nke Onye ọrụ ruo mgbe ha hapụrụ weebụsaịtị ma ọ bụ gbanyụọ ngwanrọ ahụ (ihe nchọgharị weebụ). A na-echekwa kuki na-adịgide adịgide na ngwaọrụ ngwụsị nke Onye ọrụ maka oge akọwapụtara na ụdị kuki ma ọ bụ ruo mgbe Onye ọrụ kpochapụrụ ya.
6. Storelọ ahịa ahụ na-eji ụdị kuki ndị a: "ku dị mkpa" kuki, na-eme ka ojiji nke ọrụ dị na Storelọ Ahịa ahụ, dịka ọmụmaatụ kuki nyocha eji maka ọrụ chọrọ nkwenye n'ime Storelọ Ahịa ahụ; kuki eji eme ihe iji chekwaa nchekwa, dịka ọmụmaatụ ejiri wee chọpụta ihe adịgboroja na ngalaba nke nyocha n’ime ụlọ ahịa; Kuki "ịrụ ọrụ", na-enyere aka nnakọta ozi gbasara otu esi eji weebụsaịtị Weebụsaịtị; Kuki "Arụ ọrụ", na - enyere "icheta" ntọala nke Onye ọrụ ahọpụtara ma hazie nyocha Onye ọrụ, dịka ọmụmaatụ asụsụ ma ọ bụ mpaghara nke Onye ọrụ si malite, ogo font, ọdịdị nke weebụsaịtị, wdg; Kuki "mgbasa ozi", na-enyere ndị ọrụ aka ịnye ọdịnaya mgbasa ozi dabara na ọdịmma ha.
7. N'ọtụtụ oge, ngwanrọ eji eme ihe maka ihe nchọgharị weebụ (ihe nchọgharị weebụ) na ndabara na-enye ohere ịchekwa kuki na ngwa ọrụ Onye ọrụ. Ndị ọrụ ụlọ ahịa nwere ike ịgbanwe ntọala kuki ha n'oge ọ bụla. Enwere ike ịgbanwe ntọala ndị a n'otu ụzọ dị ka igbochi njikwa kuki na akpaghị aka na mwube ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ ịkọ banyere ha oge ọ bụla etinye ha na ngwaọrụ Storelọ Ahịa. Ihe omuma zuru ezu banyere ohere na uzo eji eji kuki di na ngwanro ngwanro (ihe nchọgharị weebụ).
8. Onye na-ahụ maka ụlọ ahịa na-agwa m na mmachi na ojiji kuki nwere ike imetụta ụfọdụ arụmọrụ dị na weebụsaịtị nke thelọ Ahịa.
9. Enwere ike iji kuki etinyere na njedebe ngwụsị nke onye ọrụ Storelọ Ahịa ndị mgbasa ozi na ndị na - emekọ ihe ọnụ na onye ọrụ ụlọ ahịa.
10. More ozi na kuki dị na www.nwachukwu.nz ma ọ bụ na ngalaba “Enyemaka” nke menu ihe nchọgharị weebụ.
Akara ngosi Facebook
Akara ngosi Instagram
Akara ngosi Pinterest
2020 Mili Mili | Kwadoro site na Shopify
American Express Apple Ṅaa MasterCard visa
Jiri mmapụta a tinye ozi ndebanye aha na ndepụta. Nye ndị ahịa mgbakwunye na-esonye ma wulite ndepụta ndepụta gị.
Daalụ maka isonyere!